Mamorona fitsapana mora foana amin'ny fanamarinana | Martech Zone
Zoma, Febroary 10, 2012 Zoma, Febroary 10, 2012 Douglas Karr
Mandritra ny famakafakana ny fanairana amin'ny ora tena izy anio automation marketing ho an'ny mpanjifanay, Right On Interactive, i Marty Thompson dia nahita rohy mankamin'ny tranonkala fitiliana antsoina hoe Hamarino. Izy io dia tranokala fanandramana mora vidy tokoa izay misy fampiasa amina taonina ary interface tsotra sy tsotra ho an'ny fanandramana ny volavolanao, ny tranokala ary ny fisehonao ary maka sary anao.
Ity ny horonan-tsary Verva topy maso:
Verify dia misy ireto fomba manaraka fitiliana ireto:
Kitiho ny fitsapana - Jereo hoe aiza no tsindry ataon'ny mpampiasa mifototra amin'ny fanontaniana iray.
Fitsapana fahatsiarovana - Fantaro izay tadidin'ny olona.
Fitsapana mood - Ianaro izay tsapan'ny olona momba ny efijery.
Fitsapana preferences - Asehoy ny efijery roa ary angataho ny mpampiasa hisafidy.
Fitsapana anototra - Avelao ny mpampiasa hametraka naoty eo amin'ny pikantsary.
Fitsapana marika - Anontanio ireo mpampiasa ny hevitry ny singa sasany amin'izy ireo.
Fitsapana amin'ny tsindry multi-pejy - Jereo hoe aiza no tsindry ny mpampiasa amin'ny fizotran'ny efijery.
Fitsapana mifandray - Amboary fitsapana maro ho lasa iray mikoriana.
Latsaky ny $ 30 isam-bolana dia manamarina anao ny Verify hamorona fitsapana haingana, hizara ny fitsapana ary hahazo valiny - fizarana azy ireo amin'ny alàlan'ny Twitter, Facebook na amin'ny alàlan'ny URL tsy miankina, ary avy eo dia manampy anao hahatakatra sy handray fanapahan-kevitra amin'ny fanaovana tatitra mora vakiana sy hita maso.
Tags: ab testinghevitra momba ny famolavolanafizahana fizahanafitilianafitaovanahevitra momba ny hevitry ny mpampiasafitaovana famolavolana tranonkala